नेपाल आज | राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब १८ प्रतिशत बढ्यो, कसको कति पुग्यो?
राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब १८ प्रतिशत बढ्यो, कसको कति पुग्यो?
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसदका दुवै सभाका सदस्यसम्मको मासिक तलबभत्ता १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साउन १ देखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको हो ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने भएकाले त्यसका पदाधिकारीको तलबसुविधा स्थापनाकालदेखि नै बढी छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र विभिन्न निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले तोकिएकै पदबराबर तलब सुविधा पाउनेछन् । पदाधिकारीसँगै उनीहरूको पनि मासिक तलब वृद्धि भएको छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।